Vaovao - Misy karazana akanjo tsy mahazatra ve?
Ny akanjo fialam-boly amin'ny ankapobeny dia azo zaraina amin'ny fialam-boly avant-garde, fialam-boly fanatanjahan-tena, fialamboly am-pitiavana, fialamboly amin'ny asa aman-draharaha ary fialamboly any ambanivohitra.
1. Akanjo mahazatra Avant garde:
Ny fitafiana mahazatra an'ny Avant-garde, fantatra koa amin'ny akanjo mahazatra, dia ny fitafiana vonona efa vita, izay maneho tanteraka ny endrika famolavolana, ny famoronana endrika ary mitarika ny làlan'ny lamaody. Amin'ny vanim-potoana fialam-boly, ny mpamorona lamaody amin'ny renivohitra lamaody lehibe indrindra manerantany dia mamoaka ilay antsoina hoe lamaody avo lenta sy akanjo vita soa efa vonona ho an'izao tontolo izao indroa isan-taona, izay ny ankabeazany dia akanjo tsy maotina garde. Ny endri-javatra mahazatra amin'ny akanjo mahazatra avant-garde dia ny fampiasana lamba vaovao na manavao be dia be, ny fomba tsy mitovy, ny endrika dia avant-garde, ary ny loko sy ny lamina dia miavaka. Mba hihaonana amin'ny tsiron'ny lamaody vaovao sy hitarihana ny lamaody farany, manandrana manao izay tratry ny herinay izahay mba hanehoana ny maha-tokana ny endrika marika sy ny famoronana endrika. Eny an-tsena, ny akanjo fialam-boly an-tanàn-dehibe miaraka amin'ny vondrona fanjifana lamaody isan-karazany sy ny fironana amin'ny hatsarana dia an'ny karazana fitafiana ihany koa, saingy ny fahafaha-mampifanaraka azy dia midadasika kokoa, ary ny fomba tsy ho hafa.
2. Akanjo fanatanjahan-tena:
Ny fanatanjahan-tena dia tsy voatery ho ny fanatanjahan-tena amin'ny fifaninanana ataon'ny atleta matihanina, fa karazana fanatanjahan-tena miaraka amin'ny fanatanjahan-tena. Ny fitafiana ara-panatanjahan-tena dia natao hihaonana amin'ny fanatanjahan-tena sasany, izay afaka mampiseho ny fahatsapana sy ny fomba fanatanjahan-tena matanjaka amin'ny fanatanjahan-tena fialamboly. Ny bikan'ny akanjo fanatanjahan-tena dia matetika manakaiky ny fomba fanatanjahan-tena, miaraka amin'ny teritery antonony, loko mamirapiratra, mora ahinjitra ary tsara fampisehoana. Ny endriny, ny asany ary ny mavitrika azy dia nankasitrahan'ny besinimaro foana, indrindra ireo tanora. Miorina amin'ny foto-kevitra estetika malaza, ny akanjo fanatanjahan-tena dia mifantoka amin'ny kalitaon'ny fitaovana ambonimbony, ny teknolojia fanapahana ary ny fahombiazana na tsy fahombiazan'ny fomba fiasa marika hamaritana ny sandan'ny vokatra eo amin'ny tsena.
3. Akanjo mahazatra:
Ny akanjo fitondra amin'ny tantaram-pitiavana dia karazana akanjo tsy misy fangarony miaraka amin'ny fahatsapana fitiavana. Ireo antsoina hoe akanjon'ny zazavavy, akanjon'ny vehivavy ary akanjo an-trano sasany dia sokajy mahazatra eny an-tsena. Ny mampiavaka ny akanjo fitiavam-pitiavana dia ny tsipika malefaka sy malefaka, loko manankarena, sary maodely malalaka sy lehibe, fomba fanosotra malefaka sy mamy, modely sariitatra malefaka ary mahafinaritra, ary singa maro haingon-trano toy ny dantelina, tsipìka, durian onja, amboradara sy singa haingon-trano hafa dia ampiasaina betsaka hamoronana atmosfera tantaram-pitiavana sy fomba fialam-boly tena misy.
4. Akanjo mahazatra ataon'ny orinasa ：
Ny fitafiana manao raharaha an-tsena, fantatra ihany koa amin'ny akanjo anaovan'ny matihanina, dia teny toa mifanipaka, saingy amin'ny zava-misy ankehitriny ny fitafian'ny olona maoderina, na dia amin'ny fotoan-tsarotra henjana sy ara-dalàna aza dia tsy azo ihodivirana ny fampidirana ny fomba fialam-boly. Noho izany, ny fitafiana mahazatra an'ny orinasa dia azo raisina ho toy ny fiovan'ny akanjo fandraharahana, izay fitambarana organika amin'ny modeling akanjo ofisialy sy ireo singa fialamboly malaza. Ny famolavolana an'ity karazana akanjo ity dia mitazona ny drafitra modely sy ny fomban'ny akanjo ofisialy. Izy io dia mifantoka amin'ny antsipiriany momba ny firafitra, singa singa, loko, lamba ary fomba teknolojia hanaovana fanitsiana sasany, mba hampifangaro tsara ireo singa malaza amin'ny fomba fialam-boly amin'ny akanjo fandraharahana, mba hahatratrarana ireo henjana nefa tsy henjana, ortodoksa ary vokany tsy mahazatra, mba hanatsarana ny fifandraisan'ny asa.
5. Akanjo mahazatra: firenena
Ny akanjo an-tanety an-tanindrazana no akanjo fialamboly lava indrindra amin'ny tantara. Raha ny tena izy, ny akanjo anaovan'ny tompokolahy tompon-tany tamin'ny taonjato faha-19 no naseho ny akanjo fialam-boly maoderina, indrindra amin'ny sehatry ny fitafian'ny lehilahy. Ny fitaovana tsotra, ny maodely mahazatra sy mampahazo aina ary ny fomba maimaim-poana amin'ny voanio dia lasa fahatsapana ny olona miverina amin'ny natiora sy miaro ny natiora. Ny fanaovana akanjo an-tsaha any ambanivohitra dia karazana fitafiana fialamboly anaovan'ny olona an-tanàn-dehibe maoderina manana fihetseham-po ambanivohitra, izay taratry ny fitaizan'ny olona maoderina. Nentin'ny faritra, ny fotoana ary ny fahatsapana hatsarana manokana, ny akanjo fialam-boly any ambanivohitra dia hita taratra amin'ny endrika isan-karazany eny an-tsena, toy ny "akanjo nasionaly fialam-boly", "fanamoriana fialamboly fomba fanao folk", "fizahan-tany sy akanjo fialan-tsasatra any ivelany".